परशुराम तामाङ : यथार्थवादी व्यक्तित्व » छलफल
परशुराम तामाङ : यथार्थवादी व्यक्तित्व
(जीवनचक्र) पर्शुराम तामाङ
तपाइको शुभनाम, जन्ममिति र ठेगाना बताइदिनुस् न ?
मेरो नाम पर्शुराम तामाङ हो, म धादिङ जिल्लाको साविक सत्यदेवी गाविस हालको खनियाबास गाउँपालिका वडा नं ५मा २०३५ सालामा जन्मेको हुँ ।
आमा, बुबा, चार दाजु , एक बहिनी, श्रीमती र दुई छोरा छौं ।
आमाबुबा के गर्नुहुन्छ ?
पेसाचाँहि कृषि नै हो तर बुबाले पहिले राजनीति र समाजसेवा गर्नुभयो । हाल पनि यस्तै काममा हुनुहुन्छ, आमा घरमै बुहारीलाई सकेको सहयोग गर्नुुहुन्छ ।
कति वर्षको हुनुहुन्छ ?
आमा ६५, बुबा ७८ वर्ष पुग्नुभयो ।
स्वभाव कस्तो छ ?
परोपकारी, न्यायप्रेमी, मिलनसार, राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने सरल स्वभाव छ ।
हामी गरीखाने मध्यम वर्गीय किसान परिवारमै पर्छौ ।
आमा बुबाबाट तपाईं के कुरामा प्रभावित हुनुहुन्छ ?
बुबा न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रको जानकार हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँले थुप्रै दुःख कष्ट पाउनु भएको थियो । जस्ले गर्दा राष्ट्र«सेवक कर्मचारी वा राजनीतिज्ञ बन्नुपर्छ भनेर बेलुका गफगाफमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो । त्यसले मलाई राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा दियो । बुबाको त्यो कुराबाट प्रभावित छु ।
खेतबारी खन्दै, घाँस दाउरा बोक्दै, पढ्दै रमाइलो ढङ्गले बित्यो ।
बाल्यकालमा तपाईंको स्वभाव कस्तो थियो ?
आमाले भनेअनुसार चकचके, धेरै बोल्ने ,जिज्ञासु र मेहनती थिया रे ।
चकचके हुनुहुँदोरहेछ कुट्ने, कुटाइ खाने काम त थुप्रै भयो होला होइन ?
म विषयवस्तुमा धेरै बोल्ने र चकचक गर्ने भए पनि गल्ती गरेर पिटाइ खाएको रेकर्ड छैन ।
संयम र सहनशीलता अपनाएर काम गर्ने र सबैसँग मिल्ने भएकोले ।
हाल कस्तो हुनुहुन्छ नि ?
अहिले धेरै कुरा सिक्दै गएँ, पढ्दै गएँ, व्यवहारमा पाक्दै गएँ , अहिले कम बोल्छु, हरेक विषयमा आनुशासित र संयमित भएर काम गर्छु, अर्थात सानोको ठीकविपरीत छु ।
राजनीतिमा लाग्दा झगडा भएन ?
म लडाइ झगडा गर्दिनथेँ त्यसैले भएन ।
कक्षा १० मा पढ्दा विद्यार्थी राजनीतिमार्फत पार्टीको राजनीतिमा आएको हुँ ।
गाउँबाट एक घण्टा टाढाको स्कुल सिमलडाँडा प्राविमा ३ सम्म पढेँ ।
कक्षा एकबाट दुइमा जाँदा बोर्डफस्र्ट भएँ, निमाविसम्म दोस्रो, तेस्रा भएँ, एसएलसीमा टपटेनमा आएँ ।
स्कुल पढ्दा आर्थिक समस्या हुँदैन थियो ?
सरकारी स्कुल र कलेजको शिक्षा महँगो थिएन, त्यसैले समस्या भोग्न परेन ।
बुबाआमाले गाली गर्ने, कुट्ने कत्तिको गर्नुहुन्थ्यो ?
आमाबुबा दयालु र समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो केही भन्नु हुन्नथ्यो ।
धर्म, संस्कार, संस्कृति अनि भगवान र भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ?
गर्छु, म बुद्ध धर्मावलम्वी हुँ तर मेरो सबै धर्मप्रति सम्मान र आदर छ किनकी भगवान एकै हुन्, अपनाउने बाटोमात्र फरक हो, पुग्ने ठाउँ पनि एउटै हो । त्यसैले सबै मिलेर बस्नुपर्छ, एकले अर्काको धर्म संस्कार र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ । जात धर्म सानो ठूलो हुँदैन । धर्मले मान्छेलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँछ । धर्म नष्ट भयो भने मान्छे नष्ट हुन्छ ।
खान खेल्नमा कस्तो रुचि थियो सानोमा ?
सबैखालको खाना खान्थँे, अहिले पनि त्यस्तै छ । घरको काम र स्कुलको गृहकार्य सकेर भलिबल र फुटबल खेल्थेँ ।
विवाह कहिले कोसँग कसरी गर्नु भयो ?
२०५६ सालमा खोटाङ बुईपाकी चेली मेनुका राईसँग अन्तर्जातीय प्रेम विवाह भएको हो ।
कसरी लभ पार्नु भयो, छोटो किस्सा भन्नुस् न ?
कलेज पढ्दाखेरी अलग अलग क्याम्पस भए पनि साथीभाइमार्फत चिनजान भयो । चिनजान बोलचालकै क्रममा लभ गरियो ।
उहाँलाई विवाह गर्नुअगाडि अन्य कोहीसँग लभ प¥यो कि
धेरैसाथीहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर त्यसमा ध्यान नदिँदा लभ खासै सफल हुन सकेन ।
श्रीमती के गर्नुहुन्छ ?
गायिका हो सांगीतिक क्षेत्रमा छिन् ।
हाँकी, नढाँट्ने, नरिसाउने, मेहेनतमा विश्वास गर्ने र आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट हुने ।
तपाईं उहाँको के कुराबाट प्रवाभित हुनुहुन्छ ?
उनको हक्किपन, स्पष्टता र मलाई राजनीतिमा लाग्न निरन्तर प्रेरित गर्ने बानी राम्रो लाग्छ ।
उहाँलाई राजनीतिमा लगाउनु भएन ?
उनी गायन क्षेत्रमा भएको हुनाले राजनीतितर्फ आउनै
ठाकठुक कत्तिको पर्छ ?
उनको र मेरो स्वभाव एकैखालको समझदार छ, त्यसैले जीवनमा ठाकठुक परेन र अब पनि पर्दैन ।
अहिले आर्थिक संकट कत्तिको पर्छ ?
खासै त्यस्तो संकट पर्दैन, यदाकदा परे पनि दुवै मिलेर समाधान गर्छौं ।
जागिर खानु भएन ?
एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि गाविसमा सहायक सचिवको रूपमा एक वर्ष र सचिव उपस्थित नहुँदा ३ वर्ष कामु सचिव भएर काम गरेँ ।
राजनीतिमा कसरी र कसको प्रेरणाले लाग्नुभयो ?
बुबा पनि राजनीति र समाज सेवामै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सम्पर्क भरत शम्शेर र डीबी लामाको बुबा ललितमान घलेसँग थियो, उहाँहरूको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । मलाई पनि सानैदेखि बुबाले सामाजिक काममा हिडाउने, बुझाउने गनर््हुन्थ्यो, सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक नेता हुनुपर्छ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँकै प्रेरणाले राजनीतिमा लागेँ ।
राजनीति गर्न कतिको गाह्रो भयो ?
कठिन र अप्ठेरो अवस्था आयो, पञ्चे, मण्डले भन्थे । तर मैले पञ्चायत गइसकेपछि राजनीति सुरुवात गरेकोले मलाई पञ्चे, मण्डले भनेको के हो थाहै थिएन । त्यस्तो अवस्थामा गाह्रै
नेता को मन पर्छ ?
विपी, मदन भण्डारी, पृथ्वीनारायण शाह आदि मनपर्छ ।
संविधानसभा सदस्यहुँदै मन्त्री हुनुभयो त्योबेला कस्तो अनुभूति भयो ?
जनताको काम गर्ने सुखद अवसरको सुखानुभूति भयो ।
पुस्तक कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
राजनीति र जीवनीका पुस्तक अनि पत्रपत्रिका पढ्छु ।
विदेश भ्रमण कत्तिको गर्नुभएको छ ?
थाइल्याण्ड, सिंगापुर, भियतनाम, पाकिस्तान र भारत गएको
दुःख र सुखको क्षण ?
देश धर्म निरपेक्ष भएको दिन दुःखद र मन्त्री भएर जनताको काम गर्ने अवसर पाउँदा सुखद अनुभूति भएको थियो ।
यो सफलतासम्म आउनमा कसको प्रेरणा छ ?
आमाबुबा र श्रीमतीको ।
बुबा जीतबहादुर र आमा हरिमाया तामाङको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मनु भएका पर्शुराम तामाङ धादिङ जिल्लाका सभासद् एवं पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ हाल राप्रपाको केन्द्रीय राजनीति र समाजसेवाका काममा ज्यादै सक्रिय हुनुहुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिमार्फत पार्टीको राजनीतिमा जोडिनु भएका उहाँले राप्रविसंघमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । उहाँले पद प्राप्तिलाई भन्दा कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर जीवनलाई अगाडि बढाउँदै संविधानसभा सदस्य र मन्त्रीसम्म ल्याई पु¥याउनु भएकोे छ । उहाँको परिवार कृषि पेसामा भए पनि बुबा राजनीतिमा भएका कारण राजनीतिप्रति उहाँको लगाव रहेको थियो । उहाँले राजनीतिको माध्यमबाट जिल्लाको विकास निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ भने शिक्षा र समाजसेवाको माध्यमबाट आमजनता लाभान्वित हुने काम गरेर देशलाई योगदान दिनु भएको छ । धादिङको विकट गाउँमा जन्मिएर समाजशास्त्रमा एमएसम्मको औपचारिक शिक्षामा हासिल गर्नभएका उहाँले मन्त्री भएर जिल्लालगायत देशकै विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्नु भएको छ । कुनै दिन कसैसँग झगडा नगरी सबैलाई सकेको सहयोग गर्दै आफ्नो परिवार, गाउँ टोल, सिङ्गो जिल्ला र आमजनताको नजरमा बस्न सफल तामाङ अहिले पनि उत्तिकै काम गरिरहनु भएको छ । देश, जनता, धर्म र संविधानभन्दा ठूलो कोही हुँदैन भन्ने उहाँ राप्रपाका बौद्धिक नेतामा पर्नुहुन्छ । २०७० सालमाको संविधानसभा सदस्यमा राप्रपाबाट मनोनीत भएर कानुन बनाउने थलोहुँदै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएका उहाँले देश र जनताको हितमा थुप्रै काम गर्नुभएको छ । शालीनतामा आफूलाई अग्लो देख्ने धादिङे जनताका उनै प्रिय नेता पूर्वमन्त्री तामाङको जीवन संघर्ष अनुभव, अनुभूति, रुचि र स्वभावका विविध पाटोलाई समेटेर जीवनचक्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
धादिङको रमणीय गाउँमा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा हुर्कनु भएका पर्शुराम तामाङका ७८ वर्षीय बुबा जीतबहादुर र ६५ वर्षीया आमा हरिमाया तामाङ हुनुहुन्छ । उहाँका माइला भाइको नाम राजु, साइलाको सन्तोष र कान्छाको रञ्जित तामाङ हो भने बहिनीको नाम सीता तामाङ र श्रीमतीको नाम मेनुका तामाङ हो । यसैगरी जेठा छोराको नाम सोनाम र कान्छाको कर्मा तामाङ हो । उँहाका तीन बुहारी, भतिज जुनियर र भतिजि फेवा तामाङ रहेका छन । २०५६ सालमा खोटाङ बुईपाकी मेनुका राइसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएका उहाँका दुई छोरा जेठा ब्रिटिस कलेज र सानो मेरिडन स्कुल बालुवाटारमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ । उहाँकी श्रीमतीले गायन क्षेत्रको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहनु भएको छ । उहाँका बुबाले जनप्रतिनिधि भएर लामो समय जनताको काम गर्नु भएको छ । अहिले उहाँसँग बुबाआमा, श्रीमती र दुई छोरा हुनुहुन्छ । छोरा पढिरहनु भएको छ भने श्रीमतीले उहाँलाइ सघाउनुको साथै गायन क्षेत्रबाट राष्ट्र«लाई योगदान दिइरहनु भएको छ । किसान परिवार भए पनि उहाँको परिवार शिक्षित छ, सम्य छ, कुनै घरानियाभन्दा कम छैन । राजनीतिक चेतना त्यतिकै छ, सरसहयोग सबैमा त्यतिकै छ, श्रीमती मेनुका त्यस्तै सबै पचाउन सक्ने, झर्को नमानी सबै काम गर्ने हुनुहुन्छ । परिवारमा शिक्षा, संगीत, समाजसेवा र राजनीतिको संयोजन छ । माया प्यार त्यतिकै छ, सहयोगी भावना त्यतिकै छ । यो विषयलाई अध्ययन गर्ने हो भने आमपरिवारका लागि यो प्रेरणादायी र सुन्दर परिवार छ । उहाँमा समाजसेवाको भावना पनि त्यत्तिकै छ, गाउँलेपन पनि त्यत्तिकै छ, सहरिया परिवेश पनि त्यतिकै छ , विदेशको सम्पन्नताको अनुभव पनि छ, कृषिको अनुभव पनि छ, मन्त्री भएर नीति निर्माण तहको काम गर्दाको अनुभव पनि त्यत्तिकै छ, सुन्दै लोभलाग्दो गज्जबको पारिवारिक पृष्ठभूमि छ उहाँको । त्यही पारीवार र इष्टमित्रको सहयोगले उहाँलाई सभासद् र मन्त्रीको यात्रा सहज बनाइदिएको हो । हाल उहाँ काठमाडौंमै बस्दै आउनु भएको छ ।
४० वर्षे जीवनयात्रामा रमाइरहनु भएका पर्शुराम तामाङले थुप्रै तीतामीठा अनुभव र अनुभूति संगाल्नु भएको छ । धादिङ जिल्लाको गाउँले परिवेशमा जन्मिएता पनि उहाँले राजनीतिज्ञ र समाजसेवी भएर समाजसेवाका थुप्रै काम गर्नु भएको छ । खाई नखाई, सुती नसुती हिँडेको काम गरेको दुःखदायी अतित पनि छ, उच्च शिक्षा लिँदाको अभाव तनाव पनि छ, जनताले फूलमाला लगाइदिएको सुखद क्षण पनि छ, राजसंस्था हट्दाको र देश धर्मनिरपेक्ष भएर हिन्दुराष्ट्र«को पहिचाहन गुमेकोमा दुःखित भएको क्षण पनि छ उहाँसँग । हलो जोतेको, कोदालो खनेको, घाँस दाउरा काटेको, भलिबल खेलेको अतित पनि छ, मुलुकको सर्वोच्च निकाय संविधानसभामा माइक्रोफोन समातेर देश र जनताका लागि बोलेका आवाजहरू पनि छन् उहाँसँग । कानुन र संविधान निर्माण गर्ने विधायकको रूपमा काम गरेकोे र ऐतिहासि क नयाँ संविधान निर्माण गरेको सुखद अनुभव पनि छ उहाँमा । सामान्य किसानसँग भलाकुसारी गरेर दुःख सुखमा सहभागी भएको सन्दर्भ पनि छ उहाँसँग । सँगै खेलेका कतिपय साथीहरू गाउँमै भोक तिर्खा घरखेत, उकाली ओराली गरिरहेका छन्, त्यही जीवन भोगेर आउनु भएका उहाँ भने संसद्मा उनीहरूका अभावका आवाज बोलेको अतित पनि छ, पर्यटनमन्त्री भएर उनीहरूको सुखी जीवनका लागि विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्नु भएको सुखद क्षण पनि छ धादिङे र आमजनताकै लागि । यो उहाँको ठूलो सफलता हो, जस्ले उहाँलाई सुखद अनुभूति दिलाएको छ । उहाँसँग अप्ठेरो राजनीति गरेको अनुभुति पनि छ, राजनीतिक सहजताको अनुभूति पनि छ, सुखको अनूभूति पनि छ, दुःखको अनूभूति पनि छ । सबै विषयको अनुभव र अनुभूति संगालेका तामाङ धादिङ जिल्लाकै सफल राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
प्रावि लेबलसम्मको शिक्षा सिमलडाँडा स्कुलबाट सम्पन्न गर्नुभएका पर्शुराम तामाङले एसएलसी सत्यदेबी माविबाट २०५० सालमा उत्तीर्ण गर्नुभयो । उच्चशिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं आउनु भएका उहाँले आईए टीयूबाट, बीए सरस्वती क्याम्पस ठमेलबाट र समाजशास्त्रमा एमए त्रिचन्द्र कलेजबाट सम्पन्न गर्नुभएको छ । कृष्ण मावि दाप्चामा कक्षा एकबाट दुइमा जाँदा बोर्डफस्र्ट, निमाविसम्म दोस्रा, तेस्रा, एसएलसीमा टपटेनहुँदै उच्चशिक्षा हासिल गर्नु भएका उहाँको पढाइप्रतिको रुचि कहिल्यै नघटेको उहाँ बताउनु हुन्छ । त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएर राजावादीहरूलाई समस्या परिरहे पनि उहाँले पढाइ र आफनो राजनीतिक निष्ठालाई छोड्नु भएन, निरन्तर लागिरहनु भयो । नेपालमा सबै धर्मलाई समान रूपमा हेर्नु पर्ने धारणा राख्ने उहाँ समाजलाई वर्गविहीन बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । मिठासपूर्ण बोली, सहयोगी भावना , मेहेनती दिनचर्या, अनुशासित जीवनशैली, समााजप्रति पूर्ण जिम्मेवार एवं क्रियाशील जीवनपद्धति र सक्रिय कर्मले उहाँलाई राजनीति र समाजसेवामा सफल बनाएको देखिन्छ । विद्यार्थी अवस्थादेखि नै सबैको सेवा गर्ने सहयोग गर्ने रुचि बोक्नु भएका लामाले गाउँमा थुप्रै समाजसेवाका काम गर्नु भएको छ । वातावरण सरसफाईसम्बन्धी, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी, महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी संस्थाको सल्लाहकार, तामाङ घेदुङ संघ, राष्टिय बौद्ध महासंघ संघर्ष समिति र वाईबा समाजको सल्लाहकारमा रहेर समाजसेवाका काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसबाहेक विभिन्न संघ संस्था र शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत सल्लाहकारमा रहेर काम गरिरहनु भएको
आफूलाई किसान परिवारबाटै आएको ठान्ने पर्शुराम विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो । उहाँका बुबा पनि स्थानीय तहको राजनीतिक व्यक्तित्व नै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँका बुबाको राजनीतिक सम्पर्क र सम्बन्ध केन्द्रीय नेतासँगै थियो । त्यतिमात्र होइन, उहाँ समाजसेवामा पनि हुनुहु्न्थ्यो, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रको पनि जानकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सम्पर्क भरतशम्शेर र डीबी लामाको बुबा ललितमान घलेसँग थियो, उहाँ उनीहरूको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला उहाँले पाएको दुःख कष्टले गर्दा उहाँका बुबाले नेपालमा सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक नेता हुनुपर्छ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो रे । त्यसैले उहाँकै प्रेरणाले पर्शुराम राजनीतिमा लाग्नुभएको बताउनुहुन्छ ।
१० कक्षा पढ्दादेखि राप्रविसंघको सदस्य भएर कठिन र अप्ठेरो अवस्थामा राजनीति आरम्भ गर्नु भएका उहाँलाई बहुदलवादीहरूले पञ्चे र मण्डले भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको कुरा उहाँ सुनाउनुहुन्छ । तर, आफूले पञ्चायत गइसकेपछि राजनीति सुरुवात गरेकोले आफूलाई पञ्चे र मण्डले भनेको के हो थाहै नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट राजनीति अगाडि बढाउनु भएका उहाँले २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जिल्लामा जिविस सभापति र गाविस अध्यक्ष मनोनीत गर्ने क्रममा उहाँको जिल्लाको सत्यदेवी गाविसको अध्यक्षमा मनोनीत भई चिठीसमेत बुझेको अवस्थामा जिविस सभापतिको घरमा बम पड्किएर सभापति घाइते भएपछि सपथ लिन नपाई अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने अवसरसमेत नपाएको तीतो पीडा उहाँसँग छ । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको जनशक्ति पार्टीको जिल्ला सहसचिव भएर काम गरिसक्नु भएका उहाँले २०६१ सालको शाही शासनकालमा जिविस उपसभापतिमा मनोनीत भएर काम गर्नु भएको छ । द्वन्द्वकाल भए पनि सबै राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरी विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु भएका उहाँले धादिङ सदरमुकामदेखि दिप्लिङसम्म साङ्कोष दिप्लिङ सडक सर्भे गरी केही भागको ट्र्याक खोल्ने कामसमेत सम्पन्न गर्नु भएको थियो । सदरमुकाम सडक पिच गर्नेदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघको भवन निर्माण गर्ने कामसमेत उहाँले गर्नु भएको थियो । यस्ता थुप्रै काम उहाँले गर्नुभएको छ । राप्रपाको जिल्ला अध्यक्ष, २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा धादिङबाट समानुपातिकमा संविधानसभा सदस्य, काम गरेको केही समयमै सचेतक, प्रमुख सचेतकहुँदै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी कुुशलतापूर्वक सम्हाल्नुभएका उहाँले हाल आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । उहाँले अहिले पार्टीभित्र रहेका २२ वटा भातृ संगठनलाई समन्वय गर्ने विभागको सदस्यको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । त्यसका साथै उहाँ ३ नं प्रदेश हेर्ने गरी प्रदेश सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ । राप्रपाविसंघमा रहँदादेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएका तामाङले माओवादीको जनयुद्धको कठिन समयमा समेत अविचलित भएर पार्टीको संगठन विस्तार गर्नु भएको थियो । सबैलाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने नेता तामाङ अहिलेसम्म भूगोलमा निरन्तर खटिरहनु भएको छ । देश र जनताका लागि राप्रपामा आबद्ध हुनु भएका उहाँ पदलाई भन्दा कामलाई श्रेष्ठ ठान्नुहुन्छ । परेको बेला जस्तोसुकै समस्या र चुनौतीको डटेर सामना गर्ने उहाँ पार्टी र जनतालाई जस्तोसुकै सहयोग दिन तयार हुनुहुन्छ । पद ठूलो होइन काम ठूलो हो भन्ने मान्यता राख्ने उहाँ राप्रपाका स्पष्ट नेताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ । राप्रपाविसंघको सदस्यदेखि पार्टीको जिल्ला सदस्य, अध्यक्ष ,संविधानसभा सदस्यहुँदै मन्त्री भएर पार्टीलाई योगदान पु¥याउनु भएका उहाँ राप्रपाका इमान्दार, बौद्धिक, कर्मशील र जनप्रीय नेतामा पर्नुहुन्छ ।
बाल्यकालदेखि नै तीक्ष्ण बुद्धि, समाजप्रति समर्पित सेवाभाव एवं जनताको सुखी जीवनप्रति आफ्नै बलबुताले काम गर्दै आउनु भएका उहाँले जीवनको परवाह नगरी सबै जोखिमसँग लड्नु भयो । जनयुद्धको कठिनतम अवस्थामा संगठन र पार्टीलाई बचाउनु भयो, सबैको मन जितेर जिल्लाको राजनीति गरिरहनु भयो, सबैलाई मिलाएर लैजानु भयो, कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्नुभयो, यो उहाँको राजनीतिक सफलता हो । उहाँले मात्र हैन उहाँकी धर्मपत्नी मेनुका राईले समेत उहाँको र जिल्लाको राजनीतिमा योगदान गर्नु भएको छ । त्यो सहयोगले उहाँलाई त सहज भयो नै राप्रपालाई समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । यो तामाङ र तामाङ परिवारको महत्वपूर्ण त्याग र समर्पण हो ।
राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री पर्शुराम तामाङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकलाई शान्ति , स्थिरता, विकास र समृद्धि दिनेमा आशावादी त हुनुहुन्छ तर एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान मेटिएको, जनताको भावना नबुझिकन धर्म निरपेक्ष बनाइएकोले धार्मिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनाले जनतालाई सताइरहेको बताउनुहुन्छ । मुलुक र जनता यति गरिब हुनमा प्रमुख दलका नेताको हात रहेको र त्यसले उहाँको औधी मन दुःखेको बताउनुहुन्छ । पाँचवर्षे स्थिर वामपन्थी सरकार बनेको र त्यो सरकारले मुलुकको अवस्था सुधार्नेमा आफू आशावादी भएको बताउँदै यो सरकारले जनताको हित र आफ्नो भावनाअनुसार काम गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने बताउँदै त्यसका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य, शान्ति, सुुशासनको सुरुवात, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, यातायात र हाइड्रोको विकास,आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर युवालाई उत्पादनमा जोड्न सके मुलुक पाँच वर्षमा ठीक ठाउँमा पुग्न सक्ने बताउनुहुन्छ । तर त्यो दिशातर्फ मुलुक जाने संकेत नदेखिएकोले जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अधिकांश समय राजनीति र समाजसेवामा लगाउने पर्शुराम तामाङ मेहेनती, मिलनसार, अर्काको हितमा काम गर्न उत्साहित हुने, देश र जनताको लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार हुने क्रियाशील नेतामा पर्नुहुन्छ । हरेक समय उत्पादनमा जोडिन रुचाउने उहाँ सबैलाई उत्पादनशील बन्न प्रेरित गर्नुहुन्छ । उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि नै अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्ने भएकोले उहाँ पनि अवस्था, आवश्यकता र सामथ्र्यअनुसार सहयोग गर्नुहुन्छ । आफूलाई जनताको सेवक ठान्नुहुन्छ र त्यहीअनुसारको आचरण र व्यवहार गर्नुहुन्छ । यसले उहाँलाई अग्लो बनाएको छ । उहाँ सबैसँग घुलमिल हुनुहुन्छ, सबैलाई समान देख्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्ने बताउनुहुन्छ । खान र लाउनमा कुनै शौख छैन, धन सम्पत्तिप्रति कुनै मोह छैन, केही गरेर मरौं भन्ने सकरात्मक सोच छ, अरु केही स्वार्थ छैन । यही सोच, शैली र स्वाभावले उहाँलाई असल नेता बनाएको छ ।
राजनीति गर्दा होस् वा समाजसेवाको काम गर्दा होस्, निजी जीवनका काम गर्दा होस् वा विकास निर्माणका काम गर्दा होस् जस्तोसुकै चुनौती छिचोल्न तयार हुने पर्शुराम तामाङ सफल राजनीतिज्ञमा पर्नुहुन्छ । मध्यमवर्गीय किसान परिवारबाट आएको एउटा किसानको छोरा राजनीतिका थुप्रै छालहरू पार गरेर युद्धका भँगालाहरू तर्दै, हतियार छेल्दै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलको रजगजमा सबैको तारो बनेको राजावादी पार्टी बलियो बनाउन संगठन विस्तारमा र जनताको सेवामा अविचलित लागिरहनु चानचुने विषय होइन, जुन उहाँले गर्नुभयो । विरोधीसँग डटेर काम गर्नुभयो यो उहाँका लागि महान काम हो । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई पछाडि पारेर यो सफलता हात पार्नु चानचुने विषय थिएन । जसलाई उहाँले सामान्य बनाइदिनु भयो, यही कर्मले उहाँलाई यो उचाई दिएको छ । उहाँलाई जिल्लाले मात्र होइन देशले चिन्ने नेता बनाएको छ । यो उहाँ र उहाँको परिवारको लागि महान उपलब्धि हो ।